West Avenues Hideaway. Ukuzola, kukhuselekile, kufutshane nedolophu
Yabucala kunye nebala, kunye nokuhonjiswa kwe-eclectic vintage. Ineyadi yayo ebiyelweyo kunye nemithi yeziqhamo. Uya kuziva uvalelwe kude, kodwa usembindini weChico. Incanyatheliswe, njenge-duplex, kwikhaya eliphambili lomamkeli. Indawo yokungena kweli khaya ikwisitalato esahlukileyo, ngoko livakala libucala ngokupheleleyo. Kukho ikhitshi eligcweleyo, elinazo zonke izinto ezisisiseko ezibandakanya ikofu kunye neti, igumbi lokuhlala lokuphumla, kunye negumbi lokulala eligcweleyo elinebhedi yokumkanikazi. IA/C, kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo ekhuselekileyo nethe cwaka.
Le ndlu yakhiwa ngeminyaka yoo-1960. Inemigangatho emikhulu emidala ye-oki. Iguqulelwe ekubeni yi-duplex, kwaye indlu inkulu kakhulu kwi-airbnb. Kukho ubushushu obuphakathi kunye nomoya, kwaye unezifudumezi zomoya ezibini esithubeni kunye nesifudumezi-ndawo sokunyenyisa ubushushu ngokuthanda kwakho. Kukho igumbi lokulala eligcweleyo elinebhedi yokumkanikazi etofotofo, igumbi lokuhlambela elineshawari, igumbi lokuhlala lokuphumla, kunye nekhitshi eligcweleyo elinazo zonke izinto zokupheka ozidingayo ukuze wenze isidlo ukuba uyanqwena.
Sihlala kwindlu enkulu, yaye kusenokwenzeka ukuba asiyi kukubona, ekubeni ucango lwangaphambili lukwelinye icala lendlu. Le yindawo entle kakhulu yokuphumla kwaye uphumle ngexesha lokuhlala kwakho eChico, kwaye kukuqhuba ngokukhawuleza ukuya ezantsi kwedolophu. Indawo esihlala kuyo ikude kufuphi ne-Esplanade, eyona ndlela yaseChico. Ukuba ungena usuka kuHola we5, le ndawo kulula ukufikelela kuyo usuka kuHwy 32/Nord Highway.
Nceda ujonge iifoto, njengoko zibonisa ngokuchanekileyo indawo.
Indawo elungiselelwe ukusebenza: idesika
"Iindlela" zezona ndawo zisembindini weChico. Eli khaya likwintshona ye-Esplanade, eyindlela ende enemigca yomthi esuka edolophini yonke indlela ukuya kumantla eChico. Yimizuzu emihlanu yokuqhuba ukuya edolophini ukuya kuthenga kunye nokutya.
Uya kuba kufutshane neBidwell Park entle, kunye nesibhedlele sasekhaya, i-Enloe. Ubumelwane buthule kakhulu, kwaye awusoze uve naliphi na itheko okanye ingxolo engxolayo yalo naluphi na uhlobo, ngaphandle kukaloliwe omane edlula, ekhwaza.
Siza kufumaneka ngetekisi nangefowuni. NgoMsombuluko, unokulindela ukuba iimpendulo zinokucotha kancinane ngenxa yomsebenzi, kodwa siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuphendula ngokukhawuleza. Sikwindlu enkulu, ngoko ke ngokuqhelekileyo sinokunika uncedo olukhawulezayo, ukuba luyimfuneko. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngazo naziphi na iimfuno, kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubuyela kuwe ngokukhawuleza!
Siza kufumaneka ngetekisi nangefowuni. NgoMsombuluko, unokulindela ukuba iimpendulo zinokucotha kancinane ngenxa yomsebenzi, kodwa siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuphendula…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chico